Datuk Dr.Asri Ulas Isu Nizar-Sultan Johor -updated
Gap between rich and poor: Can ETP reduce GAP?
"Haramjadah" Najib Terbongkar Lagi: RM30 Untuk Setiap Belia hadir Himpunan
မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့် ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ
Myanmar Muslim Martyr Maung Thaw Ka with Daw Aung San Suu Kyi
Pakatan PDRM & Kongsi Gelap Itu Benar: Bersihkan Segera PDRM!
Chin Xin-Ci: 30 hours ago, I escaped from being kidnapped @ The Curve car park
OPEN LETTER TO WORLD LEADERS REGARDING RACIAL DISCRIMINATION POLICY OF MYANMAR GOVERNMENT
Posted: 30 May 2012 10:49 AM PDT
Posted: 30 May 2012 09:06 AM PDT
Dengan hormatnya merujuk kepada artikel di atas yang ditulis olehwartawan A. Letchumanan yang disiarkan di
Posted: 30 May 2012 09:00 AM PDT
Last updated at 02:23 GMT
Up to 90% of school leavers in major Asian cities are suffering from myopia -
Posted: 30 May 2012 07:11 AM PDT
Thanks to readers Shadower, Cin2Tan and Pastor David TC Loo, I have been engrossed in listening to oldies and recording impromptu jam sessions this morning and yesterday evening. Music is in my heart, soul and spirit and I am so glad my boys have been blessed with this gift.
The past few weeks have surely been the most enlightening ones in my entire life. And with all the drama and suspense, I lostalot of weight despite eatingalot. At this point of my life, I can finally say I have been enlightened and my perspectives in life realigned. To all who wrote to me, I have yet to reply and I am so sorry for my tardiness. It is not that you are not important but it is because I have been doingalot of soul searching and rested in solitude after doing tons of spring-cleaning.
I find house-work, especially spring-cleaning, to beavery therapeutic process.
To put it simply, when spring-cleaning, one may suddenly realize that something kept for decades actually has no value and one may wonder - why the heck did I keep it? It could be forafew insignificant reasons which were probably significant at the point of decision-making.
You cannot imagine the amount of rubbish I have been clearing out from cabinets and drawers in my house.
I amahoarder. I even have paper bags from the 1960's. I discovered that I can actually haveagarage sale of:
vintage paper bags from the 1960's especially those brown paper bags with white and red rope handles
vintage plastic bags from the 1970's of shops which do not exist any more, emporiums that only your grandmother might know of (Does Oriental Emporium ringabell?)
cassettes of artistes from the 1960's to 1990's
clothes that date to the 1960's as well including my wedding night evening gown (29 years ago) which I can still wear!!!! PHEW!
my older son's baby clothes, diapers and the first towel he used
my vintage 1970's original red tab Levi's jeans which is probably worth 500USD now (based on checks I made in various vintage sites)
old magazines, post-cards, stamps, badges
three boxes of scarves and pashmina shawls, some of the former date back to 1950's!!!
my childhood collection of comics eg June and School Friends, Beano Annuals, Dandy etc
my boys' collection of toys, half of which I gave toafriend's son who was spellbound by the collection
my badge, matchbox, key chain, vcd and dvd collections
I can also holdasale for handbags that date from 1970's to the present. In total, I have more than 100 handbags stored in various places till I had forgotten about them. The best part about spring-cleaning is finding $$$ in wallets or handbags. My 'harvest' came up to 120RM which I found in various handbags and wallets.
Amazingly, I still have those accessories I used in primary school, my first teddy bear, my toy train, old books especially those I treasured asayoung girl.
Life is like that. We waltz through it likeabreeze without stopping to check and to take stock of life, ourselves, values etc. Somehow, all of us need to do housekeeping - of our stuff, our emails and even affiliations/people in our lives. And then we begin to realize that something or someone we deemed as important or real or sincere may not be so. Never expect gratitude for whatever you do. Most of the time, once people deem us as 'not useful any more', we are struck off their roll. Whilst it is good to be honest and transparent, it does not mean that people with whom we trust and relate to reciprocate in the same vein of thought. One may never know their true intentions or sincerity until much too late, in some circumstances. And it is fine if we lose touch with such people for at the end of the day, it is real people, sincere friends and those withaheart ready to care, to love and to help that matter.
It is so easy to be blinded overwhelmed by circumstances, idealism or even be caught up with activities until one may not know what IS life all about.
Double standards reign be it in society or even in inter-personal relationships. For those who are too tolerant, one ends up beingadoor-mat. A brainless slave helping others. Malicious ones may not accord them respect or dignity let alone honesty.
I look back without regret for all the pain, frustration and disappointment I went through. Notasingle tear at all as I realigned my life, priorities, relationships. In fact, I am so thankful for all that has happened. Resilience, independence and level headedness are more important than acceptance or validation from people. It is what INSIDE and within us that matter. Not who are around us. Not who we believe in or help or relate to in life.
In my entire life, I have never been as happy and as contented as I am now. And I believe I have finally found myself.
And - that is suchawonderful feeling.
To those of you who have reached out to me sincerely with patience love and acceptance for who I am, thank you. I will respond to your emails soon.
My son is home and it is going to beabeautiful homecoming. Sorry for this late post. I was out the whole afternoon withaformer student who works in Seattle. Take care and haveabeautiful evening.
Posted: 30 May 2012 08:12 AM PDT
The second to last paragraph of the article says:
Idris Jala once said his own village in Sarawak did not have electricity. By now, the ETP should have brought electricity to his own village. If not, the ETP has failed miserably.
Hari Belia -2juta belia hadir?
BERNAMA sendiri takut nak umumkan berapa sebenarnya yang hadir. Tiada angka rasmi dikeluarkan.
Kemudian Najib kata no untoward accident
Itu kemalangan yang menyebabkan 17 orang cedera tu accident binatang apa?
Sekarang budak-budak itu SETIAP SEORANG dengan bangga tunjukkan tiga keping RM10.
Demikian "kebenaran" tidak boleh ditutup.
Ia akan tetap terdedah juga.
Demikian juga dengan segala penipuan-penipuan UMNo BN, SPR, PDRM, JPN dan lain-lain.
Allahumma arinal haqqa, haqqan, warzuqnattiba'ah,
Posted: 30 May 2012 05:37 AM PDT
"Ahmad Shabery menyalahkan takdir kononnya semua yang berlaku sudah takdir," kata pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) dalam satu kenyataan semalam.
"Terbaru pula Menteri terbabit cuba mengalihkan isu dengan memberikan maklumat salah kononnya semua berpunca kerana tidak ada badan mengawal selia acara sukan seperti itu dan Kementerian akan mewujudkan badan yang mengawal selia.
"Ini satu maklumat yang salah," ujar Chegubard.
"Sebagai pihak berkuasa, kami perlu meluluskan acara tempatan untuk memastikan ia dijalankan dan diuruskan dengan baik, keselamatan adalah perhatian utama kami," katanya.
"Itu hanya pandangan saya sebagai rakyat biasa yang melihat senario di negara ini bahawa masih ramai yang hidup dalam kesempitan dan memerlukan perhatian," katanya kepada akhbar Sinar Harian yang menghubungi beliau semalam.
"Mungkin kerana bidaan tertinggi dibuat Baginda Tuanku, jadi orang katakan tindakan saya itu cuba menghina Sultan, sedangkan bukan itu maksud saya," katanya.
"Jika ada yang menuduh saya menghina Sultan, itu sudah keterlaluan, kerana saya tiada niat untuk berbuat demikian.
"Jika ada mana-mana pihak yang terguris hati dengan mesej Twitter itu, saya mohon maaf, " jelasnya.
Posted: 30 May 2012 12:18 AM PDT
From the wikipedia: Arthel Lane "Doc" Watson (born3Mar 1923, died 29 May 2012) was an American guitar player, songwriter and singer of bluegrass, folk, country, blues and gospel music. He won seven Grammy awards as well asaGrammy Lifetime Achievement Award. Watson's flatpicking skills and knowledge of traditional American music were highly regarded.
Posted: 30 May 2012 01:19 AM PDT
SOURCE: MMSY- မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့် ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက အခုလက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ မြန်မာ မွတ်စလင်မ်တွေရဲ့ အဖြစ်ကို ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကလွဲပြီး တခြား ရည်ညွန်းစရာရှိ မယ်မထင်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးက ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြစ်တင်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမြင်ကိုသာ ဆွေးနွေးမှာပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့Mainstream နိုင်ငံရေးမှာ ဆက်လုပ် ကြမလား၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အရေးကိုပဲ အခုကစပြီး ဇောက်ချလုပ်ကြမလားဆိုတာ မတိုက်တွန်း လိုပေမဲ့ Mainstream နိုင်ငံရေး လုပ်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင်မ်အရေး လျစ်ဟာနေတဲ့ အဖြစ်တွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး အနာဂတ်မှာ ဘယ်လို ရပ်တည်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ယူဆလို့ဒီဆောင်းပါးနဲ့ဆော် သြပါတယ်။
ကိုယ်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က နိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းပါဘူး။ မိသားစုတွေ ဆွေမျိုး ရင်းချာတွေက နိုင်ငံ ရေးနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါ လျက်၊ မြန်မာမွတ်စလင်မ်အများစုက ဆင်းရဲ ပြီး ပညာရေးနှိမ့်ပါးတဲ့ အလုပ်သမား လူတန်း စားဖြစ်နေလို့ သီးသန့်ကြိုးစားစရာများ လိုအပ်ပါလျက်၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေးသ မားတွေက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ခံစားနေရတာတွေကို မသိ ကျိုးကျွံပြုနေပါလျက် မြန်မာ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်အရေးထက် တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့အရေးဆိုပြီးတော့သာ ဦးစားပေးနေ ကြတာကို တွေ့ ရတယ်။ လက်တွေ့လိုအပ်ချက်ကို ဘေးချပြီး မွတ်စလင်မ်တွေ သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ အ ကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ မျက်နှာကောင်း (Symbolic အဓိပ္ဗါယ်) ရဖို့သဘောထားကြီးပြနေသလိုဖြစ်နေတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက ခုထက်ထိ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေ ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ပြန်ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံအတွက်၊ လွတ်လပ် ရေးအတွက်၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဆိုပြီး ဘယ်တုန်းကမှ မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် သီးသန့် မလုပ်ခဲ့ဘူး။
မွတ်စလင်မ်အတွက်ချည်း ကွက်လုပ်ရင် တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာမရှိရာရောက်မယ်၊ အမြင်ကျဉ်းရာကျမယ်၊ တ တိုင်းပြည်လုံးခံစားနေရခြင်းအတူတူ မွတ်စလင်မ်အရေးချည်း မလုပ်သင့်ဘူးလို့ယူဆကြတယ်။ တချို့ ကလည်း မွတ်စလင်မ်အရေးလုပ်ရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မ၀င်ဆံ့မှာစိုးကြတယ်။ ဒါတွေကြောင့် Mainstream မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးထဲဝင်ပြီး ကိုယ့်အတွက်မပါတဲ့ NLD အနိုင်ရရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒုက္ခသည် ရေး၊ ရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားအရေး စတဲ့ အရေးပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်တွေကို အခမဲ့ ရှေ့ နေလိုက်ပေး ကြတယ်။
စကားဖျက်ပြောချင်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေက မွတ်စလင်မ်ကိစ္စ ကွက်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုရင် Mainstream နိုင်ငံ ရေးက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် လုပ်နေတာဟုတ်လို့ လား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဒီ လောက်တိုက် ခိုက်စော်ကားခံနေရတာ၊ ကံမ္မနဲ့ ဖားကန့် မှာ ပလီဖျက် ပစ္စည်းလုခံရတာကို အားလုံး ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ တာလဲ။ ကံမ္မမှာ ပလီဖျက်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေရဲ့အိမ်တွေဖျက်ဆီးလုယက်တော့ ဘယ်ရှေ့နေ၊ ဘယ်တရားသူကြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံသမား၊ ဘယ်လူ့ အခွင့်အရေးသမားက ၀င်ပြောပေးလဲ။ ကျနော်တို့ဘယ်အ ဖွဲ့ မှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် သူတို့ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ထဲမှာ ကျနော်တို့ အတွက် မပါဘူး ဆိုတာ သက်သေပဲ။
သမိုင်းတလျှောက်မှာလည်း ဒီလိုပဲ။ မွတ်စလင်မ်တွေက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေးခဲ့ကြတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ ဆင်းရဲတွင်းနက်လာ နေပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒီများက ဘာသာရေး လူမျိုးရေး နှိပ်ကွပ်လာ နေသည့်တိုင် လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ထောက် ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ ဆုတ်ယုတ်လာနေတဲ့ မွတ်စလင်မ်တို့ ရဲ့ ဘ၀ကို လျစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို့မစွပ်စွဲလိုပေမဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် ပေးရမဲ့အချိန်၊ အင် အားနဲ့ကာယဥာဏတွေကို လွတ်လပ်ရေး အတွက်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပေးခဲ့တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အားထားရတဲ့ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်တို့ ကိုကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ကို ဆန့် ကျင်ဖို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာ သာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကို အစပျိုး အမြစ်တွယ်စေခဲ့တယ်။ ဒို့ ဗမာအစည်းအရုံးက ကပြားလို့ ဆိုတဲ့လူတွေ ကို ဗမာပြည်မှာမွေး ဗမာပြည်မှာကြီးလို့ဗမာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သီး သန့် မနေပဲ ဗမာလို နေပြီး ဗမာ့လွတ်လပ် ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အယူအဆတူတဲ့ ဆရာကြီး မွတ်စလင်မ်တွေ တကွဲတပြား တိုင်းရင်းသား နာမည်များခံကြမဲ့အစား ဗမာလိုနေကြဆိုပြီး ဆရာကြီးက ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ ဗမာကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်။
အခုတော့ကြည့်ပါ။ ပသီ၊ ပသျှူး စတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ မူလတိုင်းရင်းသားစာရင်းက လည်း ထုတ်ခံရ၊ ဗမာလို့ လည်း သတ် မှတ်မခံရ၊ ကုလားများအဖြစ်သာ နှိပ်ကွပ်တာ ခံနေရတော့တယ်။ အရင်တုန်းက အခြေအနေတွေအရ ဦးရာဇတ်မမှားခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ အစ္စလာမ်ဘာ သာကိုးကွယ်သူမှန်သမျှ ကုလား တွေတွေဆို ပြီး ဂျောင်ထိုးလိုက်ကြပြီ။ ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ့်ကိုခြောက်ဆိုတဲ့ စကားပုံများလားလို့စဉ်းစားကြည့်မိ တယ်။ ဦးရာဇတ်အပြင်ရှိပါသေးတယ်။
အမျိုးသားနေ့ ဖြစ်လာတဲ့ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၁၁ ယောက် ထဲက ၁ ယောက်က မွတ်စလင်မ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဘရှင်။
ဗြိတိသျှ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ "God Saves The King" ကို မဆိုဘို့ ပထမဆုံး အာခံခဲ့တာ ပထမဆုံး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုထွန်းစိန်။
ခင်ဗျားလိုလူမျိုး တော်လှန်ရေးမှာ မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် အားထားရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌလည်းဖြစ် အင်္ဂလိပ်ကို အံတုပြီး အလုပ်သမားသမဂ္ဂကို ဦးဆောင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဦးရာ ရှစ်။
ဖ.ဆ.ပ.လ ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံမှာ ဗမာမွတ်စလင်မ်တွေ လူနည်းစုယူမလား လူများစုယူမလားဆိုပြီး ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုကိုယ်တိုင် ကြိုက်တဲ့အခွင့် ရေးရွေးချယ်ခွင့် ပေးခဲ့တာတောင် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး အရေးကြီး နေချိန် တစည်းတလုံးထဲဖြစ်အောင် သီးသန့် ခွဲမနေဘူးဆိုတဲ့ မြန်မာမွတ်စ လင်မ်တွေ။
ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ညီလာခံကြီး ဖြစ်လာဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ တောင်တန်းနဲ့ ပြည်ပ ပူးပေါင်းရေးအဆိုကို စပြီးတင်သွင်းခဲ့ ဗ.မ.က (ဗမာမွတ်စလင်မ်ကွန် ဂရက်)။
ပင်လုံညီလာခံ ပျက်တော့မဲ့ဆဲဆဲမှာ ညီလာခံမဖြစ်ဖြစ်အောင် ကြိုစားကယ်တင်ခဲ့တဲ့ သံအမတ်ဟောင်း မွတ်စ လင်မ် ဦးဖေခင်။
ဒါပေမယ့် ဘုရားပြီးတော့ ငြမ်းဖျက်ဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမရောရ ဘူးဆိုပြီး ဗ.မ.က ကို ဖိအားပေးပြီး ဖျက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ သမိုင်းဖျောက်တာများ ၂၀၁၀ က ၀င်းတင့်ထွန်းပြုစုတဲ့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး အသင်းအပင်းများ အညွန်းဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဖဆပလရဲ့ လက်ရုံးတဆူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗမာမွတ်စလင်မ် ကွန်ဂရက်ကို လုံးဝဥသုန် ပေါ်တင်ချန်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိပါသေး တယ်။
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ အသက်သေခံသွားခဲ့တဲ့ NLD ရဲ့ ဇာတ်ဆရာလိုတင်စားခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ မောင်သော်က(ခ) ဗိုလ်မှူးဘသော်။
ဘဝအပျက်ခံ ထောင်ဒဏ် ဆယ်စုနှစ်နဲ့ ချီပြီးကျခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ပြုစုခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ထွန်း။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး။
ဒီလူတွေ ပေးဆပ်ခဲ့သလောက် ဒီနေ့မှာတော့ သောက်ကုလား၊ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုပြီး ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းစကားလုံးတွေနဲ့ ဆဲတာပဲ ခံကြရပြီ။
နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်တွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ပြည် တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနတွေမှာ မွတ်စလင်မ်သတင်းထောက်တွေရှိတယ်။ မွတ်စလင်မ်သတင်းဌာနထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပဲ Mainstream မီဒီယာတွေမှာ လုံးဝနီးပါး အချိန်ပေးနေကြတယ်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့ အတွက် အပြစ်မတင်ပါ။
နိုင်ငံတော်ကောင်းစားရေးမျှော်ကိုးပြီး အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ တွေ၊ ပါတီတွေ၊ မီဒီယာတွေမှာ အခြေချလိုက်ခြင်း ဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေ ဘာဆုံးရှုံးလဲ?
အဆဲခံ အခွဲခြားခံ အနှိပ်ကွပ်ခံအပြင် အချက် ၂ ချက် ကို ထောက်ပြပါမယ်။ အရည်အချင်းတူသည့်တိုင် (သို့ ) သာနေသည့်တိုင် အဲ့ဒီ Mainstream ထဲကလူတွေ ခွဲခြားမှုကို ကျော်လွန်ပြီး သင့်တော်တဲ့နေရာရောက်အောင် မနည်း ကြိုးစားနေရ လို့နိုင်ငံရေးထက် အတိုက်အခိုက် အခွဲအခြားမှုအတွက် ရင်ဆိုင် အချိန်ပေးရတယ်။ အ ရည်အချင်းရှိသည့်တိုင် ခွဲခြားမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွားနေရလို့ နေရာလည်းမရ၊ တဖက်မှာ မွတ်စလင်မ် အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်နဲ့ အင်အားတွေလည်း အလဟသဖြစ်ကုန်တယ်။
ခွဲခြားမှုမရှိဘူးလို့ မပြောပါနဲ့ ။ အဖွဲ့ အစည်းကြီးတခုဆီက မွတ်စလင်မ်ဖြစ်လို့အတွင်းရေးမှုးပေးလုပ်လို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ သက်သေ အခိုင်အမာရှိတယ်။ ABSDF ကျောင်းသားဟောင်းတွေ၊ ဗကသ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ နဲ့NLD သမားတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပေါ်တင် ဆဲနေတာတော့ ထည့်ပြောစရာတောင် လိုမယ်မထင်ဘူး။
နောက်တချက် – ကိုယ်က အဲ့ဒီ Mainstream အဖွဲ့ တွေ မီဒီယာတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး အိပ်ကပ်စိုက်လုပ်ထားပေမဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေ ခံရတဲ့အချိန် အဲ့ဒီအဖွဲ့ အစည်းတွေက အသိကျိုးကျွံပြုတာပဲခံရတယ်။ (ဘာအနစ်နာခံခဲ့လို့ လဲဆိုတာ မေးရင် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ ဦးလေးမိသားစုအကြောင်းပြောပြပါမယ်။)
88 မှာ မွတ်စလင်မ်တွေ အများနည်းတူပါဝင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ မှာ သံဃာတော်တွေကို ၀ိုင်းရံခဲ့တယ်။ ၈၈ တည်းက ခုထိ NLD နဲ့အတိုက်အခံတွေဖက် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ သတင်းသမားတွေလည်း တောကြိုတောင်ကြားသွားပြီး သတင်းယူပေးခဲ့တယ်။ မြစ်ဆုံတုန်းကလည်း မြစ်ဆုံ အများနည်းတူ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ဘာရလဲ။? ဖားကန့် နဲ့ကံမ္မမှာ ပလီတွေ ဖျက်ဆီးတော့ ဘယ်သူဘာကူပြောပေးလဲ။? အန်အန်လ်ဒီကိုထောက်ခံတဲ့ မိန်းခလေးငယ်တွေကို မဖွယ်မရာဆဲလို့သွားပြောတာတောင် အလေးမထားဘူး။
မီဒီယာသမားတယောက်က ကိုယ့်ကိစ္စ ၀င်မပြောပေးလို့စိတ်ဆိုးတာလားလုို့ရိပြောပြောတယ်။ တာဝန်ယူမှု နည်းပါးပုံများ မှတ်သားလောက်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေက ကိုယ်တိုင်ပြောဖို့အင်အားမရှိလို့အင်အားရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အုပ်စုတွေ သတင်း ဌာနတွေ ကို အကူအညီတောင်းတာ အဲ့ဒီလို ပေါ့ပျက်ပျက် ပြန်ဖြေတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ကိုယ်က အင်အားဘာကြောင့် မရှိ တာလဲ။ အင်အားမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းက အရည်အချင်းရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ် တွေက စုပေါင်းပြီး ကိုယ့်အင်အား ကိုယ်ထောင်ရ မဲ့အစား Mainstream မှာပဲ ကြားကပ်ခံရမယ်ဆိုတာ သိလျက် နဲ့ခုထက်ထိ ၀င်ရော နေသေးလို့ လို့ ပဲယူဆတယ်။ အရည်အချင်းရှိပေမဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဆိုဒ်လိုင်းလုပ်ခံ လာရ လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာတာ အင်အားရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ မပြောနဲ့ သြဇာညောင်း နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကို ချည်းကပ်နိုင်တဲ့ မွတ်စလင်မ်တွေတောင် ဘယ်နား သွားရှာရမှန်းမသိဘူး။ ကိုယ့်ကို တိုက်ခိုက်နေလို့တိုက်ခိုက် နေပါတယ်လို့ဖွင့်ပြောဖို့သတင်း ဌာနလည်းမရှိပြန်။
စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးတွေလည်း သူများအသိအမှတ်ပြုအောင်ဆိုပြီး NLD ကို လှူလိုက်၊ ဟိုအဖွဲ့ လှူလိုက် ဒီ အဖွဲ့ လှူလိုက် မြန်မာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အတွက်ကျတော့ ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ဘူး။
မွတ်စလင်မ်တွေက ဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်၊ ကာယ၊ ဥာဏ ငွေကြေး စတာတွေကို Mainstream မှာပဲ ပုံအောလိုက်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ Mainstream တွေ အနိုင်ရပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းစားရင် ငါတို့ အ တွက်လည်း ပါမယ်ဆိုပြီး အယူမှား အမှတ်မှားပြီး Mainstream တွေမှာပဲ ၀င်အားဖြည့် ကြတယ်။ အနစ်နာခံကြ တယ်။ ပေးဆပ်ကြတယ်။ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ ထောင်ဖို့ ၊ အင်အားရှိတဲ့ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့မီဒီယာအဖွဲ့ဖွံ့ ဖြိုးရေး အဖွဲ့ တွေ ဖြစ်လာဖို့အလေးမစိုက်မိတော့ဘူး။
အခုလို မွတ်စလင်မ်တွေကို တိုက်ခိုက်လာတော့ ဘယ်မှာလဲ ကိုယ့်အဖွဲ့ အစည်း၊ ဘယ်မှာလည်း ကိုယ့်မီဒီယာ၊ ဘယ်မှာလည်း ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်။ တခုမှ မရှိဘူး။ ကိုယ်တွေ ပါဝင်ပုံအောခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေအဖွဲ့ တွေ၊ လူ့ အခွင့်အ ရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေလည်း အရေးကြုံလာရင် ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ဖက်မှာ ကိုယ့်မိခင် အဖွဲ့ အစည်းတွေတောင်မရှိဘူး။ ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး အစစ်ပဲ။
ဒါကြောင့် အရင်က မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သင်ခန်းစာယူပြီး အနာဂတ် မြန်မာမွတ် စလင်မ်တွေ အရင်ခေါင်းဆောင်တွေလို ပေးဆပ်တုန်းကပေးဆပ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ တော့ ကုလားလို့ ပဲ အဆဲခံ၊ အဖိခံရတဲ့ အဖြစ်ဆက်ခံအုံးမလားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အနာဂတ် မှာ ဖွတ်မရချင်နေပါစေ၊ ဓားမ ထပ်ဆုံးလို့ တော့ မဖြစ်ဘူး။
မှတ်ချက် – ဆောင်းပါးရှင်၏ အမြင်နှင့် အာဘော်သာဖြစ်သည်။
Posted: 30 May 2012 01:22 AM PDT
Kuala Terengganu -Seorang remaja perempuan bawah umur antara lima warga Thailand yang dicekup dalam sebuah bilik rahsia selepas digeledah selama dua jam oleh anggota Jabatan Imigresen Terengganu dalam satu operasi 'OPS Sayang' 8 Mei lalu jam3pagi di sebuah rumah urut "Macam-macam ada' di Jalan Ladang, di sini.
Gambar: Remaja berusia 16 tahun ini (kiri) dipercayai bekerja sebagai tukang urut di sebuah rumah urut, "Macam-macam ada' di Jalan Ladang, Kuala Terengganu
Mereka dipercayai bekerja sebagai tukang urut yang turut menawarkan khidmat urutan 'istimewa' serendah RM50 dengan berpakaian seksi bagi menarik pelanggan. -SH
Posted: 29 May 2012 09:46 PM PDT
BBC ONLINE May 2012
Last updated at 01:44
Posted: 29 May 2012 09:00 PM PDT
Do you notice something in this picture?
Posted: 29 May 2012 09:37 PM PDT
Yesterday was my second clinic duty for the year at Taiping Hospital. Since we only send our volunteers onceamonth to Taiping for clinic duty, and we have3teams, our turn would come once every3months. For Ipoh clinic, I'd usually go every 2nd and 4th Wednesdays of each month.
The other2teams have2volunteers in each team, while for my team I cater for any trainee volunteers who'd like to join me. Yesterday however, I was alone. The moment I got to MOPD, I went straight to the doctor's room to inform the nurse I was already there and to enquire if there were any cases to be referred. According to the nurse there were quiteafew cases.
I waited at the praying room cum makeshift counselling room, located just behind the doctor's room. Wasn't bothered to get chairs, so I just sat on the carpet, with my netbook on lap, surfing the internet while waiting for the cases to be referred.
Afterawhile, the nurse brought inanew case –askinny looking guy, in his late thirties. Looking at his name which was quite unique, I remembered he used to call me before, seeking financial help. Another PLHIV gave him my number and told him to ask me if we Buddies could offer financial help. But our funds are more for children education, and since this guy was unmarried, there wasn't much I could offer him but choices of where he could seek help from.
Rogayah has7children, all from her first marriage. When her first husband died, she then remarried. The 2nd husband died about4years ago of TB. Apparently, when the 2nd husband died, Rogayah and her children were tested for TB, all turned out negative. I'm not really sure if the husband was diagnosed HIV+, or if he ever got tested for HIV. But when he died, Rogayah was not tested for HIV.
As I went to the doctor's room to return Rogayah's medical file, the doctor immediately told me that Maznah, the young lady I went to visit earlier this month atasquatter area, had already given birth toababy boy. Remember Maznah? I posted her story here. She's supposed to deliver in July, but last week, when she kept on vomiting every time she ate anything, even her meds, she was warded again. And she ended up having to deliver the baby, prematurely.
Guess who came to the hospital with Maznah? Her boyfriend… the father of the baby she just delivered. Has he been tested for HIV? Errrmmm…. he doesn't even know Maznah has HIV. So isn't he going to be tested? Well, according to Maznah, the plan was to get his blood sample under the pretext that they needed blood for the baby and so they needed to get his blood tested. Maznah was afraid he may leave her just like that without even getting himself tested if he knew Maznah was HIV+.
Another PLHIV was supposed to see me yesterday. Someone from Ipoh, who is alreadyaclient of Buddies, told me thatafriend of his in Taiping wanted to register under Buddies and was interested to join us for the Family Day. I told him to get his friend to see me in Taiping during my clinic duty. He didn't turn up until 1 pm.
The nurse on duty also asked ifafriend of hers working nearby, who's alsoaPLHIV, wanted to see me as well. He too, didn't turn up until 1 pm.
Then I figured out, based on the name given, the guy mentioned by the client and the guy mentioned by the nurse must be the same person. He was the one who wanted to see me, but he was the one who didn't turn up. I couldn't wait too long at the makeshift counselling room since the room is actuallyapraying room. The staff there would want to use the room during lunch break for their prayers…
Posted: 29 May 2012 09:34 PM PDT
Myanmar Muslim Martyr Maung Thaw Ka with Daw Aung San Suu Kyi. Daw Aung San Suu Kyi first political speech in front of central hospital on 8.8.88 . Beside her actress Khin Thida Tun. Pic source FB of Hla Htay
Posted: 29 May 2012 09:09 PM PDT
Snapshot of the Press Interview in Kwong Wah Yit Poh on Air Itam
Posted: 29 May 2012 10:28 PM PDT
"Campur tangan datang dari banyak pihak termasuk ahli politik," katanya. -mk
Macam-macam ada di dalam PDRM.
Patutlah dituduh menjadi lembu UMNO BN selama ini.
Demi menjaga kredibiliti dan intgriti pasukan polis, sebuah Suruhanjaya Siasatan perlu diwujudkan untuk mebersihkan PDRM.
Tetapi malang, tuntutan rakyat dipekakkan telinga oleh Najib, sehinggakan tuntutan Suruhanjaya untuk bersihkan SPR pun tidak diindahkan.
Tidak mengapa, hukum kebenaran akan "menghukum" Najib akhirnya. Itu keyakinan kita.
Posted: 29 May 2012 08:31 PM PDT
Pakatan Rakyat strongly condemns the killing of more than 90 civilians in Syria last Friday of which 32 were children under the age of 10. We further demand that the Syrian government immediately cease the use of heavy weapons in population centers, and call on the Syrian government military and militia to abide completely by Kofi Annan's peace plan.
Hence, we now urge the Malaysian government to observe Human Rights Watch's call for accountability by referring the situation in Syria to the International Criminal Court (ICC) and in unison with other respectable countries, sack the Syrian ambassador and recall our Malaysian ambassador from Syria in protest of this brutal killing of civilians.
Dr Dzulkefly Ahmad – Central Committee Member, Parti Islam SeMalaysia.
Posted: 29 May 2012 08:44 PM PDT
Read the full personal account by Chin Xin-Ci whose story was made public, through an article in THE STAR today:
by Chin Xin-Ci on Monday, 28 May 2012 at 09:39 ·
Posted: 29 May 2012 07:58 PM PDT
OPEN LETTER TO WORLD LEADERS REGARDING RACIAL DISCRIMINATION POLICY ON ISSUING OF MYANMAR NATIONAL REGISTRATION CARDS
Myanmar government had declared that they have started the Democratization of Myanmar. But recently the Union Ministry for Immigration and Man Power of Myanmar has launchedaprogram called "Moe Pwint" Project under which citizenship scrutiny cards and family member registration documents are issued for its natural citizens only excluding the mixed blooded people of Chinese, Indians, Bengalis, Muslims of Myanmar and especially Rohingyas.
They have revived the above bigot law of the previous Military Government's discrimination of the Myanmar Citizens based on race and religion.
The remaining mixed blooded people and especially Muslims of Myanmar are regarded unfairly as naturalized citizens and are required to apply for citizenship again although they were already recognized as Myanmar citizens after strictly scrutinized repeatedly. Their citizenship scrutiny cards would be renewed for them only if they meet criteria under the law concerned. The government has even declared that they would refuse to issue citizenship scrutiny cards for them under the present project.
We are worried what they are going to do on these people if they were rejected to issue new citizenship scrutiny cards. Are Myanmar authorities going to arrest them and deport millions of them out of Myanmar?
They should understand that even the Rohingyas whom they had wrongly chased out during the Naga Min Campaign were forced to accept back because of International pressure.
Or are they just want to give trouble to these people so that they could not travel freely, could not study in universities and deny them the government jobs or setting up their private business or buying properties?
International leaders should just FREEZE the suspension of SENCTIONS till this bigot Racist Myanmar Government agree to issue or replace ALL its citizens with new IDs. No need to made them apply again but we understand that Myanmar Government has the right to investigate like every government around the world, if there is any suspicion of irregularities or fraud in getting the OLD National Registration Cards. Instead of blanket rule for all, they should scrutinize based on any suspicious individuals.
Even if nothing happen this ruling would simply open the flood-gates of corruption which is rampant in Myanmar Government Servants especially in the Ministry for Immigration and Man Power.
(On behalf of all the mixed blooded people and Muslim citizens of Myanmar)
Dated 29 th. May 2012.
Please kindly read the following news report from the Eleven Media Group
Myanmar under constant threat from infiltration of foreigners
Reported by Wai Yan Phyo Oo Translated and Edited by Myint Win Thein
Myanmar has been under constant threat from infiltration of foreigners as it borders with two world's most populated countries with the populations of 1.2 billion and 1.3 billion who share similar physical features, cultures, religions and traditions with Myanmar nationals. In addition, there is another neighbor to west of it withapopulation of over 130 million.With the aim of preventing the infiltration of foreigners into its territory, the Union Ministry for Immigration and Man Power of Myanmar has launchedaprogram called Moe Pwint Project under which citizenship scrutiny cards and family member registration documents are issued for its natural citizens. An official from the ministry said, "The phases one and two of the project was implemented during the periods from 1 July to 31 October and from 1 February to 31 March in 2011respectively, and we are going to start the phase three on 1 June. We have two types of citizens in Myanmar, one being the natural citizen and the other the naturalized citizen. According to the Myanmar Citizenship Law 1982, natural citizens are descendants of eight major national races within the boundary of Myanmar such as Shan, Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Myanmar, Mon and Rakhine and every national and every person born of parents, both of whom are nationals. Moe Pwint Project aims to issue citizenship scrutiny cards and family member registration documents to natural citizens or citizens by birth. Another type is naturalized citizens who are required to apply for citizenship, and citizenship scrutiny cards are issued for them if they meet criteria under the law concerned. We do not issue citizenship scrutiny cards for them under the project. Infiltration of foreigners is really taking place, especially in the western and north eastern parts of the country. Although we do not need to prevent Bengalis and Chinese in Myanmar from holding citizenship scrutiny cards, we have to take necessary measures to prevent the infiltration of foreigners for security reasons and interracial problems."